Diyaar Garowgii Martigalinta Xuska 6aad Ee todobaadka dhaqanka dalka oo la soo gabagabeeyay. - Cakaara News
Diyaar Garowgii Martigalinta Xuska 6aad Ee todobaadka dhaqanka dalka oo la soo gabagabeeyay.
Jijiga( Cakaaranews ) Arbaca 17ka, February, 2016, Wasiir ku xigeenka dhaqanka iyo dalxiiska DDSI mudane Baashe Cabdi Ismaaciil ayaa maanta shir jaraayid ugu qabtay xafiiskiisa warbaahinta deegaanka iyo tan dalkaba.waxayna ahayd ujeedada shirkaasi jaraayid in uu ka warbixiyo xuska 6aad ee todobaadka dhaqanka ee qoomiyadaah iyo shucuubta dalkeena itoobiya oo bishan aan ku jiro ee Yekatiit 15 keeda 2008TI lagu xusayo caasimda deegaanka ee jigjiga.
Wuxuuna sheegay wasiir ku xigeenku in guud ahaanba si meeqaam sare ah loo soo gabagabeeyay u diyaar garowgii xuska todobaadka dhaqanka qoomiyadaha iyo shucuubta itoobiya ee lagu xusayo caasimada deegaanka ee jijiga taasi oo uu tilmaamay in bilihii ugu danbeeyay lagu jiray diyaarinta nidaamkii loo martigalin lahaa qoomiyadaha iyo shucuubaha dalkeena itoobiya, diyaariyay goobihii lagu soo bandhigilahaa agabka dhaqanka ee uu deegaankeenu leeyahay, diyaariyayna goobihii ay booqan lahaayeen qoomiyadaha iyo shucuubta dalkeenu iyo diyaarinta goobihii la dajinlahaa martida taasi oo uu sheegay wasiirku in ay qoomiyad walba soo bandhigidoonto dhaqankeeda todobaadka uu socto xuskani.
Wariyayaasha ka socday warbaahinta kala duwan ayaa su’aalo badan oo ku salaysan xuskan waydiiyay wasiir ku xigeenka kuwaasi oo uu sharax dheerka bixiyay. xuskan 6aad ee ay martigalinayso xukuumada DDSI ayaa qoomiyadaha iyo shucuubaha kala duwan ee dalku ay ku soo bandhigayaan dhaqamadooda kala duwan taasi oo keenaysa isdhaxgalka wada noolaanshaha qoomiyadaha iyo shucuubta dadyowga dalkeena itoobiya iyo waliba sii xoojinta qaranimadooda.